Imitha yeBlaze: Ipulatifomu Yokuhlola Umthwalo Wonjiniyela | Martech Zone
Imitha yeBlaze: Ipulatifomu Yokuhlola Umthwalo Wonjiniyela
ULwesine, May 8, 2014 Douglas Karr
BlazeMeter inikeza abathuthukisi ipulatifomu yokuhlola umthwalo wokulingisa noma isiphi isimo somsebenzisi sezinhlelo zokusebenza zewebhu, amawebhusayithi, izinhlelo zokusebenza zeselula noma izinsizakalo zewebhu, ezisabalalayo kusuka kubasebenzisi abangahambelani abangu-1,000 300,000 kuya ku-XNUMX +. Ukuhlolwa komthwalo kubalulekile kumasayithi nakuzinhlelo zokusebenza ngoba eziningi zisebenza kahle ngaphansi kokuthuthuka, kepha zinqamuka ngaphansi kobunzima babasebenzisi abafanayo.
I-BlazeMeter inika amandla amamethrikhi wokusebenza wabathuthukisi nabasunguli ukukhomba masisha ukuthi hlobo luni lokulayisha iwebhu yakho
namasayithi weselula noma izinhlelo zokusebenza zingaphatha ngempela. Izici zeBlazeMeter zifaka:
Akukho Vendor Lock-in - iyahambisana ne- I-Apache JMeter ngakho-ke akuyona ubuchwepheshe bokuphathelene. Sebenzisa noma isiphi iskripthi se-JMeter noma i-plugin ngaphandle kwesidingo sokuguqulwa.
Isondlo Mahhala - akukho ukusetha noma ukufakwa okudingekayo njengoba kungukuhlolwa kokusebenza okususelwa emafini.
Ukulinganisa okuzenzakalelayo - Test 300, 3,000 noma 300,000+ abasebenzisi. Ubuchwepheshe bokuhlinzeka buqala ngokuzenzekelayo ukufunwa, amaseva azinikezele esivivinyweni ngasinye.
Isevisi Yokuzimela Nesidingo - Akukho mjikelezo omude wokuthengisa noma wezinsizakusebenza ezidingekayo ngaphambi kwesikhathi. Uthola ukufinyelela okungenamkhawulo kumandla wokuhlola angenamkhawulo 24/7.
Ukuqapha kohlelo lokusebenza - I-Application Performance Monitoring ephelele (i-APM) yedatha ezinemininingwane yokusebenza kwezinga lohlelo lokusebenza ukukhomba nokuhlaziya izingqinamba zokusebenza.
Ukuhlanganisa - Ukuhlanganiswa kwe-APM ngezixazululo eziphezulu ezifana ne I-Newicic nikeza ukubonakala kokuphela kokuphela kweseva, uhlelo lokusebenza (iwebhu neselula), nokuqapha kokuhlangenwe nakho komsebenzisi. Ukuhlanganiswa kufaka phakathi iJenkins CI (CloudBees), i-Bamboo (i-Atlassian), i-TeamCity (i-JetBrains), i-JMeter Plugin nabanye.
I-Comprehensive Protocol Support kanye ne-Advanced Scripting Capability - dala izivivinyo eziyinkimbinkimbi ezilingisa umsebenzi wangempela womsebenzisi kusayithi lakho noma kuhlelo lokusebenza.
Ongokoqobo futhi Esinembile Umthwalo Server - dala izivakashi ezivela ezindaweni eziningi ngasikhathi sinye bese usabalalisa umthwalo kumaseva amaningi ukufaka umthwalo wokulinganisa.
Ukuxhaswa Kweselula - hlola zombili izinhlelo zokusebenza zeselula namawebhusayithi ngokurekhodwa kwedivayisi yeselula. Hlola ngokunembile ukusebenza kweselula ngokulingiswa kwenethiwekhi yeselula.
Ukubika Okusebenzisana Kwangempela Kwesikhathi -Bheka zombili izithombe ezinkulu kanye namamethrikhi ezingeni lesici nokubikwa kwempophoma.
Tags: i-apache jmeterapmUkuqapha Ukusebenza Kokusebenzaatlassiani-bambooblomemithaisisombululo sokuhlola umthwalo esuselwa efwiniamafujenkins cijetbrainsjmeterI-latencyukulayishwa kokulayishaukuhlolwa kokulayishwa kohlelo lokusebenza lweselulaukuhlolwa komthwalo weselulasaasukuhlanganaukuhlolwa kokulayishwa kwesicelo sewebhu
Ungawakha Kanjani Umsebenzi Wokumaketha Komphakathi